I-China Ukupheka Amafutha we-Usoso we-Amafutha nge-Spout nge-spout kanye ne-iron stainless iron Factory and Manufacturers | UChuancheng
Ukupheka Amafutha engilazi we-Amafutha nge-Spout nge-spout kanye negobolondo lensimbi engagqwali
Kwenziwe kusuka engilazini esezingeni eliphakeme, enendawo ebanzi ecwazimulayo ecrystal, izithinteli zamabhodlela e-airtight, kanye nokuthululela izikhala nge-lver-release snap lids.
Kwenziwe kusuka kwinsimbi ephezulu engenazisekelo enezingilazi ezingezansi, umzimba wekilasi wensimbi engenasici.
Indawo yokudlela yase-Classic nenhle ibukeka futhi izwa, isabalalisa i-oyiga neviniga kuvumela ukuthulula okulula okulawulwayo nokuncipha okungaphezulu kokuchitheka.
Amabhodlela engilazi asezingeni eliphakeme ahle kakhulu ukuthi asetshenziswe uphuzo oluketshezi, izithako, uwoyela, uviniga, iwayini lokupheka, usawoti nokunye okuningi.
ukusetshenziswa uwoyela, uviniga
ukuphrinta ukuphrinta kwesilika, njll
uphawu logo yekhasimende eyamukelekayo
isikhathi sokuthumela kungakapheli izinsuku ezingama-30
isampula Isilinganiso sesikhathi se-1.free fo isampula2.sampula izinsuku ezingama-7-10. I-sampuli yomklamo wamakhasimende, imali yesampula yi-USD100-200, imali eyisampula ingabuyisela imali uma i-quantitycan ihlangana ne-MQQ ngokujwayelekile
UKUFAKA I-OIL NEVINEGAR DispensER SET - Amabhodlela ka-Olive e-olive neviniga cruet angenawo isiponji okuphekiwe nokugqoka
I-OLIVA OIL CRUET SET - Ngenxa yomklamo wayo ongenasigaxa, isabalalisa samafutha omnqumo kwenza kube lula kakhulu ukufaka uwoyela noma uviniga kunoma yisiphi isidlo! Ngaphezu kwalokho, isici se-non-Drip sebhodlela lamafutha siqinisekisa ukuthi ikhishi lakho lihlala lihlanzekile.
IZINHLIZIYO ZOKULAHLEKA KAKHULU ZESIKHWELEKILE - Iziphethu ze-BPA ezingenagalaji zokuthambisa izimbotshana zingahlanzwa zihlanzekile ngamanzi afudumele; Amabhodlela okuhambisa ingilazi aphehlwa ngamanzi okugeza
UKUSETYENZISWA KWEVESATILE - Ilungele izinhlobo eziningi zikawoyela kanye uviniga, usoso, noma namanzi. Izivakashi zizothanda ukusebenzisa le mikhumbi emnandi.
I-OLIVILE OIL NE-VINEGAR DISPENSER SET iza ebhokisini lesipho elenza kube kuhle ukubeka ukumamatheka ebusweni bomuntu; noma ngabe kukrisimusi, okwemuva kwendlu, umshado noma usuku lokuzalwa, isithasiselo seviniga sebhalsamu esimnandi kakhulu
Esedlule: setha nge-airtight spout ekhishini ingilazi yebhodlela lamafutha omnqumo
Olandelayo: Ibhodlela Lamafutha
Sula Ibhodlela Lamafutha Olive
Ibhodlela Lamafutha Olive
Ibhodlela Lengilazi Ye-Olive
Amabhodlela e-Olive Amafutha Engilazi
Ibhodlela Lamafutha Esikwele
Ingilazi Ecacile Engilazi Egwinyiwe Ijarari Yezinyosi nge ...
I-160ml ingilazi Usawoti ne-Pepper Grinder Set